BLACKJACK! 1.126 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.126 လြန္ခဲ့ေသာ3ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို BLACKJACK!
BLACKJACK! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Blackjack 21: အကောင်းဆုံး Blackjack ဂိမ်းအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်း! အဆိုပါအနက်ရောင်ဂျက် 21 ကိုအခမဲ့ APP နှင့် Las Vegas မှာကာစီနို Blackjack 21 Play!
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Blackjack ကဒ်ဂိမ်း app ကို! အွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ Play သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်း!
Android ပေါ်မှာစစ်မှန်သောအခမဲ့ Blackjack ဂိမ်းများ - Blackjack 21 ကိုအခမဲ့ရိုက်မရနိုငျပါသညျ! ဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံး Blackjack Twentyone ကဒ်ဂိမ်း Play!
ဤသည်အခမဲ့ Blackjack ဂိမ်း app ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိတ်သတ်များအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ဆုအနိုင်ရမဆိုအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်မထားဘူး။ 21 ဂိမ်းကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံလောင်းကစားဝိုင်းမှာအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့ဆိုလိုပါဘူးဒီအခမဲ့ Blackjack အတွင်းအောင်မြင်မှု။
Blackjack နှင့်အတူပြဿနာရှိနေပါသလား? ချက်ချင်းထောက်ခံမှုများအတွက် BJHa@12gigs.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
BLACKJACK! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BLACKJACK! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BLACKJACK! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
BLACKJACK! အား အခ်က္ျပပါ
sosgames စတိုး 13.99k 2.16M
BLACKJACK! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BLACKJACK! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.126
ထုတ်လုပ်သူ Super Lucky Casino
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://superluckycasino.com/privacy-policy/
App Name: BLACKJACK!
Release date: 2016-07-08 10:29:57
လက်မှတ် SHA1: C4:5E:9C:57:77:8A:11:8D:41:25:E5:56:EF:FF:0F:6E:02:64:E5:AC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jean Rozin
အဖွဲ့အစည်း (O): "Icenta
နယ်မြေ (L): Baltimore
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): MD
BLACKJACK! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ